Momba anay | Hebei Lihua pharmaceutical Co., Ltd.
Hebei Lihua pharmaceutical Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy teknikan'ny fitsaboana biby, miaraka amina renivohitra voasoratra 80 tapitrisa yuan. Miaraka amin'ny iraky ny "Zato Taona iainana, fiompiana matanjaka sy fanambinana ny fambolena", ny orinasa dia tapa-kevitra ny ho tonga mpamatsy vokatra iraisam-pirenena any an-toerana kilasy voalohany mifototra amin'ny teknolojia sy talenta.
Niorina tao amin'ny faritra fampandrosoana ny vehivavy Shijiazhuang Nanwu ny orinasa tamin'ny taona 2003. Tamin'ny 2004, dia nisaina ho "Star Enterprise of Scale Production Production Veterinary" ao Shijiazhuang City. Tamin'ny taona 2005, dia nomena isa ho "Hebei Provincial Science and Technology Enterprise" sy "National Star Promoting Project Key Promote Product Enterprise" "Tamin'ny taona 2006, dia nomena azy io ho" marika marika fanafody mahery vaika indrindra amin'ny indostrian'ny fitsaboana veterinera ao Shina "avy any Shina Fikambanan'ny fahasalamana momba ny biby, ary tamin'ny 2007 dia notondroina ho "Orinasa mpitsabo miompy 20 ambony indrindra ao amin'ny faritanin'i Hebei" avy amin'ny Fikambanan'ny vokatra momba ny fahasalamana momba ny biby Hebei. Tamin'ny taona 2008, nangataka tany 35.5 mu tao amin'ny Xinle Airport Industrial Park, Shijiazhuang City izahay, ary nanangana tobim-pamokarana vaovao, ary niditra amina dingana vaovao. Tamin'ny taona 2010, atrikasa famokarana 4 sy andalana famokarana 7 an'ny toby vaovaon'ny orinasa no nandalo ny fizahana GMP nasionaly indray mandeha, ary nanomboka ny fomba ofisialy ary napetraka tamin'ny famokarana. Tamin'io taona io ihany, dia navoakan'ny Xinle City ho "Fampiroboroboana fampiasam-bola folo lehibe" nataon'i Xinle City. Tamin'ny taona 2011, nahazo mari-pankasitrahana ny «Fampianarana fanao fampianarana» avy amin'ny Oniversite fambolena Huazhong ny orinasa. Nohatsara kokoa ny fiaraha-miasa amin'ny sekoly sy ny orinasa. Tamin'ny 2012, mba hampivelarana ny tsena iraisam-pirenena dia nandalo azy indray mandeha isika. ISO9001, fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena ISO22000. Tamin'ny 2013, nanitatra ny rojom-pandraharahana ny orinasa ary niditra an-tsehatra tamin'ny sehatry ny fiompiana anaty rano. Ny drafitra ankapobeny ho an'ny tetik'asa fiompiana kisoa 120.000 voajanahary dia nekena ho amin'ny fananganana. Ny dingana voalohany amin'ny tetikasa dia mirefy 300 hektara mahery. Amin'izao fotoana izao dia miasa tsara ary izy no tetik'asa lehibe indrindra momba ny fiompiana anaty rano ao Xinle. Tamin'ny 2015 dia natomboka ny fiomanana amin'ny fananganana atrikasa vaovao, nampidirina andalana famokarana maro ho an'ny takelaka, granula, tsindrona tsy voadidy mandritra ny fotoana fohy, sns., Hiomanana amin'ny fampandrosoana ny tsena iraisam-pirenena. Hatramin'ny nananganana ny orinasa, tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fiompiana anaty rano, ny sakafo sy ny fampiraisana ary ny fahazoana dia nahatratra tsikelikely fanamorana haingana teo amin'ny sehatry ny fambolena maoderina. Tamin'ny taona 2016, nomena ny mari-boninahitra "Key Shijiazhuang Agricultural Industrialization Leading Enterprise" ny orinasa. Tamin'ny volana Janoary 2017, ny tsipika famokarana vaovao ho an'ny takelaka, granula ary tsindrona tsy misy farany dia nandany ny fanekena ny GMP sy ny ISO, ary nanomboka niasa sy namokatra. Nomena isa io taona io. "SMEs momba ny siansa sy ny teknolojia Hebei". Tamin'ny taona 2018, nomena "Hebei Industrial Enterprise R&D Institution" sy "Enterprise tech-high" izy. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2019, dia naoty "Key Leading Enterprise of Hebei Province" ary "Hebei Science and Technology Small Giant Enterprise". Mino mafy ny orinasa fa ny haitao fototra no vokatra voalohany!
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 216, ary ny fampianarana any amin'ny oniversite ary mihoatra ny 80% amin'ny totalin'ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, ny varotra vokatra eto an-toerana dia manome taratra faritany mihoatra ny 20, ary manompo vondrona lehibe sy fambolena kely sy salantsalany.
ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena 15 (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, sns.).
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 216, ary ny fampianarana any amin'ny oniversite ary mihoatra ny 80% amin'ny totalin'ny orinasa. Mikasika ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny orinasa dia miara-miasa amin'ny oniversite sy ny mpampianatra toa ny Oniversite fambolena Huazhong sy ny Oniversiten'i Lighthouse Wuhan. Misy fanafody vaovao 4 haavo nasionaly nambara, ary vokatra patanty 6 sy fomba fanomanana patanty famoronana 3 no azo. Mandritra izany fotoana izany dia hatsangana ivon-toerana mpanohana R&D sy ivon-toerana fanaraha-maso kalitao ary hatsarana mba hanomezana hery ny fampandrosoana maharitra sy haingana an'ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao, ny varotra vokatra eto an-toerana dia manome taratra faritany mihoatra ny 20, ary manompo vondrona lehibe (COFCO, Yangxiang, Luo Niushan, Tangrenshen, Yurun, Xiangda, sns.) Sy ireo toeram-pambolena kely sy salantsalany. Tamin'ny 2017 sy 2018, nandalo an'i Etiopia izy ireo, Ny fanekena ny Sudan International GMP dia manokatra ny tsenan'i Lihua any ivelany, ary ny vokatra vokarina any amin'ny firenena 15 (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, sns).
Ny orinasa dia mifototra amin'ny foto-kevitra iraisana, miaraka amin'ny fanahin'ny fampiroboroboana mialoha sy ny fikatsahana ny hatsarana, ny kalitaon'ny fitsaboana ny olona amin'ny fahatsoram-po sy ny asa mazoto, miaraka amin'ny olona amin'ny saina ary ny olona mieritreritra saina; avy amin'ny fampandrosoana maharitra ny asa, miaraka amin'ny talenta fahitana. Amin'ny alàlan'ny fampidirana, fambolena ary fampivelarana talenta tena tsara, ary amin'ny alàlan'ny vokatra sy serivisy avo lenta mba hanomezana anjara biriky tsara amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiompiana Sinoa, Hebei Lihua pharmaceutika dia hanatanteraka ny fanoloran-tenany amin'ny sehatry ny fitsaboana biby sy ny fiompiana taonjato faha-21. , ary efa nanao ezaka tsy an-kijanona Miasa mafy!
Ny atrikasa famokarana dia mampihatra mafy ny fitakiana fitantanana GMP ary mitaky ny mpiasa tsirairay amin'ny antsipiriany rehetra mba hahatonga azy ireo hahatsapa fa tsy bitika ny kalitaon'ny famokarana. Ny fitantanana henjana sy ny fitantanana manara-penitra ihany no afaka mamokatra vokatra tsara, izay lazaintsika matetika, misy fandrindrana ao an-tsaina, Mazava ho azy fa manaova fanafody.
Ny orinasanay dia mifototra amin'ny siansa sy ny haitao ary ny talenta, ary manolo-tena amin'ny famoronana marika vaovao misy toetra Lihua. Mba hamaly ny filàna isan-karazany amin'ny vokatra fitsaboana veterinera eny an-tsena manerana ny firenena, ny Lihua Pharmace dia manizingizina ny hijoro eo an-tampon'ny indostria, manolotra manam-pahaizana maro ho fototry ny fikarohana sy ny fampandrosoana an'i Lihua, ary miara-miasa amin'ireo manam-pahaizana sy laboratoara ambony. amin'ny indostria hampiroborobo ny fampandrosoana ny fikarohana sy ny fampandrosoana zava-mahadomelina. . Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny fanahin'ny faharanitan-tsaina ary mifantoka amin'ny fanaovana vokatra. Vokatra enina efa misy no nahazo ny patanty modely ho an'ny zom-pirenena ary vokatra telo no manana nahazo patanty famoronana firenena , mitarika ny fironana amin'ny indostria. Mandritra izany fotoana izany dia manambara zava-mahadomelina vaovao ho an'ny firenena izy ary manangana marika Lihua. Mino tanteraka izahay fa ny asa miadana sy ny fikirizana, ny faharanitan-tsaina ary ny kalitao!